Ndị na-azụ ahịa azụmaahịa dị iche! | Martech Zone
Onye dere ederede Bob Bly enyewo ndepụta nke ihe mere ịre ahịa ji dị iche na ndị ahịa. Edere m banyere nzube n'oge gara aga, ekwenyere m na nke a bụ ezigbo ihe atụ. Na nzube nke onye na-azụ ahịa azụmaahịa pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ndị ahịa:
Onye na-azụ ahịa azụmaahịa chọrọ ịzụta.
Onye na-azụ ahịa azụmaahịa nwere ọkaibe.
Onye na-azụ ahịa azụmaahịa ga-agụ ọtụtụ akwụkwọ.
Usoro ịzụta ọtụtụ usoro.
Otutu izu ahia.
Ngwaahịa azụmahịa dị mgbagwoju anya karị.
Onye na-azụ ahịa na-azụta maka uru ụlọ ọrụ ya? Na nke ya.
Maazị Bly na-abanye na nke ọ bụla ma na-agbasawanye na egwu na mkpali nke onye ọrụ azụmaahịa! Izere nrụgide ma ọ bụ ihe isi ike, egwu nke ihe a na-amaghị ama na ụjọ nke enweghị ikike na usoro ahụ bụ isi ihe dị mkpa iburu n'uche na usoro ahịa na ahịa.
Ọ bụrụ na ị nwere minit ole na ole, gbaa mbọ gụọ isiokwu niile gbasara 7 ọdịiche dị n’etiti ndị ahịa B2C na B2B, Iwu na Ndị mmadụ dị iche iche. O nwere ike inyere gị aka ichegharị echiche gị!
Tags: -achọgharịadị ndụMari Smithna-ere n'Ịntanetgbasie ike wordpressỌhụrụ Mmekọrịta Ahịavideo nkatavideo ogbako
Jan 14, 2009 na 12: 37 AM
Nnukwu akwụkwọ ozi - nakwa, a na-akọkarị onye na-azụ ahịa azụmahịa na nke kachasị mkpa, onye na-azụ ahịa ahịa dị mkpa!
Jenụwarị 14, 2009, elekere 2:04 nke abalị
Ndị ahịa anyị bụ naanị ụlọ ọrụ teknụzụ B2B mana anyị na-eche ihe ịma aka ihu mgbe anyị na-ere ọrụ anyị, dịka ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ, ma ha nọ na mpaghara B2B ma ọ bụ B2C. Ndepụta a nwere isi ihe magburu onwe ya ka anyị buru n'uche ma ọ bụrụ na anyị nwere nkụda mmụọ n'oge usoro mmepe azụmahịa; Atụmanya anyị dị iche karịa ndị na-azụ ahịa n'otu n'otu, isi ihe anyị maara nke ọma mana ọ naghị ewute anyị icheta ya ugboro ugboro. Ana m atụ anya ịgụ akụkọ zuru ezu - daalụ maka ịkọwa ya.